Thank You - Confirmation - Oromo / COVID-19 Updates and Information - State of Minnesota
Talaallii COVID-19 fudhachuu keessaniif galatoomaa!
Isin amma kennaa kaardii Viizaa $100 akka badhaasaatti fudhachuuf galmooftanii jirtu.
Gaaffii badhaasa keessanii erga galchitanii sa'a 24 keessatti iimeeliin mirkaneeffannaa isin qaqqaba. Iimeeliin mirkaneeffannaa isin hin qaqqabne yoo ta'e - ykn iimeeliin mirkaneeffannaa isin qaqqabee teessoon poostaa keessanii sirrii miti yoo ta'e - irra deebi'aa gaaffii badhaasaa keessan ergaa maaloo. Iimeelii hojjetu hin qabdan yoo ta'e -- ykn deeggarsi yoo isin barbaachise-- Toora Uummataa COVID-19 Muummee Fayyaa Minnesota tiif (833) 431-2053 irratti Wiixataa hanga Jimaataatti sa'a 9 a.m. hanga 7 p.m. tti, akkasumas Sambata 10 a.m. hanga 6 p.m. tti bilbilaa maaloo.
Nuti iyyannoowwan adeemsa keessa dabarsaa fi odeeffannoo talaallii qulqulleeffachaa jirra, ulaagaa guutuu keessan ammoo erga galmooftanii torbeewwan lama keessatti isiniif mirkaneessina. Kaardii erguun mirkaneeffannaa booda hanga torbeewwan shanii turuu mala. Haalota tokko tokko keessatti, gadi fageenya odeeffannoo xumuruuf Mootummaa Minnesota irraa dhaga'uu maltu.
Talaalamuu keessaniif galatoomaa! Tokkoon tokkoon talaallii ittisa bal'aa, hawaasaa nuti ofii keenyaa fi namoota biroo guutummaa Minnesota keessaa ittisuuf barbaannu ijaara. Doozii jalqabaa talaalliiwwan Pfizer fi Moderna fudhattan yoo ta'e, doozii keessan isa lammaffaa yeroo beellama keessaniitti yaadadhaatii fudhadhaa maaloo. Doozii isa lammaffaatiif beellama qabachuun yoo isin barbaachise, dhiyeessaa isinitti dhiyoo jiru barbaaduuf mn.gov/vaccine daawadhaa.
Hiriyoonni keessan doozii isaanii isa tokkoffaa Hagayya 22 fudhatan yoo ta'e, isaanis badhaasa $100 fudhachuuf ulaagaa guutuu akka danda'an itti himuu hin dagatinaa.